U dir lacag caalamka | Resources ka USAHello | USAHello
Si aad u soo dirto lacag caddaan ah iyada oo loo marayo Gram ama WalMart2World, waa inaad marka hore la helo meel ay ka shaqeeyaan. WalMart2World waa in dhammaan dukaamada Walmart. goobaha Gram yihiin dukaamada, dukaamada, iyo saldhigyada gaaska. Waa inaad keentaa aqoonsi iyo lacag caddaan ah. Oo ma aad awooddid inaad isticmaasho credit ama debit card. Waxaad ka heli kartaa Gram iyo Walmart meelaha kuu dhow.
Haddii aad rabto in aad soo dirto iyada oo xisaab bangi, waxaad isticmaali kartaa adeeg online WalMart2World ee. Waxaa lagu weydiin doonaa in aad marka hore si ay u abuuraan xisaab online. Iyada oo WalMart2World, lacagta gaaray daqiiqo iyo lacagta ajuurada oo hoose. ajuurada waa qadar go'an, ama "lacag guri." Money Gram iyo wax yar ka qaalisan oo gaabis ah. Laakiin waa ikhtiyaar fiican haddii aadan awoodin in ay u safraan Walmart a.
Western Union waa shirkadda adeegyada maaliyadeed. lacagta kuu soo diri karaa website- ama app casriga ah. Waxaad u baahan doontaa xisaab bangi si aad lacag online diri. Waxay sidoo kale kaa qaadi doonaa lacag. Haddii aanad lahayn xisaab bangi, waxaad weli lacagta u diri kartaa caalami ah iyada oo loo marayo Western Union. Waxaad ka heli kartaa a lookalka.
Nidaamka ugu caansan ee bedelaada lacagta caalamiga ah ee internetka ama casriga ah waa Xoom. Marka aad furatid xisaab Xoom a, aad lacag caalamka in dheeraad ah u diri kartaa 100 boqol dalalka iyo gobollada. The qiimaha lacagta diraya iyada oo loo marayo isbedel Xoom. Mararka qaarkood waa lacag go'an. Mararka qaarkood waxay ka qaadaan boqolkiiba. Waxaad u baahan doontaa in ay galaan faahfaahinta akoonka bangiga inaad lacag u dirto. Waxaad sidoo kale u baahan doonaa faahfaahinta qofka aad diraya.